Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress. Navoitran’ny fanambarana an-gazety ary fa:. Nandà izany ankitsirano ny governemanta ary mieritreritra i Zombia raha ninia nanaparitaka izany tsaho izany i Andry TGV. Fa aleo aloha izaho hitondra ka! Pour en savoir davantage, y compris comment contrôler les cookies, voir: Tena mahavita izany mihitsy ny mponina’Antananarivo tahaka ny niambenana ny teny Faravohitra ka! Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Pour en savoir davantage, y compris comment contrôler les cookies, voir: Politique relative aux cookies. Hijery ny Tenim-Pirenena rehetra? Ary dia tanisainy amin’izay izay mety ho ataon’ny TGV hanetsiketsehana ny vahoakan’ny renivohitra, Antananarivo, mieritreritra raha hiambina azy ireo, tahaka ny efa niambenany ny tranon-dRavalomanana amin’izay mety ho fanafihana ataon’ny mpikarama an’adin-dRatsiraka tamin’ny Mialisenfout moa nieritreritra fa mamazivazy ny governemanta ary nasongadinyny tenin’ny minisitra, Bruno Andriantavison, indray mandeha hoe:.
Mila fanohanana avy amin’ny namana sy ny mpamaky toa anao ny fikambananay hitoerany ho mahaleotena, maimaim-poana, ary hahazaka miasa maharitra! Hijery ny Tenim-Pirenena rehetra? Mandika ny tantaran’ny Global Voices izahay mba ho hitan’ny rehetra ny fitantaran’olo-tsotra manerantany.
VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra:. Telopolo taona mahery i Andry Rajoelina Ben’ny tanànan’Antananarivo, tompon’ny VIVA, sy tompona orinasa hafa manam-pahombiazana, tahaka ny Injet, orinasam-pifandraisana, sy ny Domapub, orinasan-dokambarotra iray bowco tantanin’ny vadiny, Mialy Razakandisa, avy amin’ny fianakaviana malaza.
Andry TGV, izay mahavariana mitovitovy lalana nodiavina amin’i filoha — tsy nandia fianarana ambony, saingy manana toe-tsaina mahay mandraharaha tokoa ka nahomby teo amin’ny sehatra nisy azy, nefa sarotra ny fifandraisany amin’ny governemanta, ary nirotsaka ho mpitondra — dia tsy nifanara-kevitra tamin’ny Filoha sy ny governemanta hatramin’ny nandreseny. Nihahenjana ary izany fifandraisana teo amin’ny filoha sy ny ben’ny tanàna izany, tamin’ny herinandro, raha nandefa ny revirevy sy ny rediredin-Ratsiraka Didier, filohan’i Madagasikara teo aloha, ny VIVA orinasan’ny Ben’ny tanàna, rehefa avy naseho nandritra ny fotoana maharitra ny sarin-dRatsiraka ofisialy tamin’ny naha-filoha azy, Io fihetsika iray io dia notsikerain’ny sasany.
Tafala teo amin’ny fitondrana Ratsiraka tamin’nynandritra ny fifidianana iray izay samy nilazan’ny roa tonta, izy sy Ravalomanana, izay Ben’ny tanàna tamin’izany fotoana izany, ho samy nandresy. Voatery nialokaloka tany Frantsa Ratsiraka taorian’ny firotsahana an-dalambe nandritra ny andro maromaro, ny fanaovana barazy nataon’ny olom-pirenena, ary bbosco fanohanan’ny firenena Tandrefana, ankoatra ny filohan’i Frantsa, Jacques Chirac.
Ahitana ny fitsikerana mivaivay an-dRavalomanana io lahatsary io ary azo jerena amin’ny teny malagasy ao amin’ny dailymotion. Mialisenfout moa nieritreritra fa mamazivazy ny governemanta ary nasongadinyny tenin’ny minisitra, Bruno Andriantavison, indray mandeha hoe:.
Hoy i Tomavana naneho hevitra:. Amin’izay hanihany izay ihany, Jentilisa nanao lohateny hoe:. Ary dia tanisainy amin’izay izay mety ho ataon’ny TGV hanetsiketsehana ny vahoakan’ny renivohitra, Boxco, mieritreritra raha hiambina azy ireo, tahaka ny efa niambenany ny tranon-dRavalomanana amin’izay mety ho fanafihana ataon’ny mpikarama an’adin-dRatsiraka tamin’ny Tena mahavita izany mihitsy ny mponina’Antananarivo tahaka ny niambenana ny teny Faravohitra ka!
Ary aza matahotra fa tsy doon ho lasa filoham-pirenena ingahy ka! Fa aleo aloha izaho hitondra ka! Mbola tsy ampy taona hitondra ingahy tsinona!
Nafana ihany koa ny resaka momba an-dRatsiraka ao amin’ny serasera. Mora manadino ny gasy a!!!! Ny mahatsikaiky anefa, dia nandritra io herinandro io ihany koa no nanomanan’ny governemanta ny fihaonam-ben’ny antoko politika malagasy rehetraka anisan’izany ihany koa ny mpanohitra.
Ny fandaharam-potoana tamin’io andron’ny 17 Desambra io dia ny hisian’ny fifanakalozana malalaka eo amin’ny samy mpilalao politika, ka hivoaka avy ao ny tolo-dalàna hanovana tatnara fitsipika mifehy ny antoko politika.
Araka ny vohikalan’ny Filohany tanjon’ny fanovana dia ny hanamafisana ny antoko politika ka ahafahany mandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Tsara ny manamarika fa mpanohitra teo aloha? Ankehitriny moa dia mpanohitra hatramin’ny tsinay tantaraa an-dravalomanana i Zafy Albert. Tokony ho 30 eo ho bosci moa ny antoko politika nandà tsy hanatrika. Namoaka fanambarana an-gazety moa ry Serge Radert sy ry Serge Zafimahova taty aoriana namoahany ny antony nanetsika azy hanao ny volavola sy fampitandremana.
Heverina fa tsy ankasitrahany ny fomba nampiasana ny volavolany tamin’ny 17 Desambra ary nasehony fa misintaka amin’izay vokatry ny fihaonana ry zareo. Navoitran’ny fanambarana an-gazety ary fa:. Nandà izany ankitsirano ny governemanta ary mieritreritra i Zombia raha ninia nanaparitaka izany tsaho izany i Andry TGV. Fa miandry fotoana ny zavatra rehetra Iza no mahita raha sarinady anakonana ny fanomezana ny tany 1.
Mbola mitohy ny fampihenjana-tady. Fa hoy ny filazan-kevitry Jentilisa:. Raha tahaka an’i News2Dago sy Jentilisa avokoa moa ny rehetra [ fa tsy voatery ho izany kosa aloha e! Tokony hifandanja anefa ny hevitry ny andaniny syny ankilany farahafaharatsiny.
Tsy azoko hoe rehefa mifandanja dia maninona? Anarana tsy maintsy fenoina. Alefaso imailaka ny hevitra hafa mipoitra amin ity lahatsoratra ity. Ie, efa lasa teny anglisy mbamin’ilay tokony ho teny espaniola ao anatiny aza Ny marik-ity takelaka ity dia efa voapetraka Creative Commons Attribution 3. Izahay Takelaka fisoratana ho an’ireo mpandika teny Teny ierana.
Académie malgache « TANIKO Madagascar
Rwdio noterena hijanona Voadika ny 23 Desambra VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra: Raha hamaly ity hevitra ity. Aza alefa in-droa ny hevitra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.
Dikandahatsoratra Vakio amin’ny teny FrançaisEspañolEnglish. Lohahevitra Fahalalahàna miteny Fanoherana Fifidianana Politika. Tantara Malaza Indrindra Manerantany. Tantaram-pitiavana Iray Teny Amorondranomasina.
Global Voices Amin’ny Teny Malagasy. Zavatra mahavariana eny amin’ny lalambe. Tahiry isambolana Tahiry isam-bolana.